‘नक्कली सगरमाथा आरोही’ लाई प्रतिष्ठित पुरस्कार - inaruwaonline.com
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र १२, २०७७ समय: ८:१५:१२
नयाँदिल्ली। भारत सरकारले पर्वतारोहणका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेहरूका लागि दिँदै आएको प्रतिष्ठित तेन्जिङ नोर्गे नेसनल एड्भेन्चर अवार्ड विवादमा तानिएको छ । हिमाल आरोहण र साहसिक पर्यटन क्षेत्रमा निकै प्रतिष्ठित मानिएको यो पुरस्कार सगरमाथा चढेको दाबी गरेका नरेन्द्र सिंहलाई दिने भारत सरकारको घोषणा विवादास्पद बनेको हो ।
नरेन्द्रलाई पुरस्कार दिने भारत सरकारको निर्णयप्रति भारतीय आरोहीहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । यस वर्ष सिंहसहित अन्य ६ जनाले यो पुरस्कार पाउँदै छन् । जसमा सगरमाथा आरोही अनिता कुन्डु पनि छिन् । उनी दक्षिणी र उत्तरी मोहडाबाट सगरमाथा चढ्ने पहिलो भारतीय महिला हुन् । उनीहरूलाई आगामी अगस्ट २९ मा राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले पुरस्कार दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
भारतको हरियाणा राज्यका नरेन्द्र तिनै व्यक्ति हुन्, जसमाथि २०१६ मे २० मा विश्वको उच्च शिखर सगरमाथा आरोहणको झूटो दाबी पेस गरेर प्रमाणपत्र लिएको आरोप लागेको छ । उनको आरोहणमाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । त्यही भएर आरोहण क्षेत्रमा सम्बद्धहरूले शंकाको निवारण नहुँदै यस क्षेत्रकै प्रतिष्ठित पुरस्कार दिइनु तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाकै अपमान भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नरेन्द्रलाई पुरस्कारको घोषणा हुनासाथ सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूले उक्त निर्णयप्रति व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नरेन्द्रको दाबीमाथि भारत र नेपाल सरकार दुवैले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न मागसमेत उठेको छ ।
त्यस्तो माग पर्नेमा पर्छन् भारतका चर्चित पर्वतारोही कुन्टल जोयसर । सगरमाथालगायत विश्वका २ दर्जनभन्दा बढी शिखरको आरोहण गरिसकेका जोयसरले प्रमाणपत्र नक्कली र सक्कली यकिन गर्ने आफ्नो काम नभए पनि विवादास्पद विषय टुंगोमा नपुगी पुरस्कार दिनु आश्चर्यजनक भएको बताए । ‘पुरस्कारबारे सुन्नासाथ म त स्तब्ध भएँ, कसरी यति ठूलो पुरस्कार यस्तो व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरियो ?, कम्तीमा छानबिन गरेर टुंगोमा पुगेपछि गरेको भए हुने हो,’ उनले भने ।
उनले नरेन्द्रको पृष्ठभूमि र मिडियामा आएका सूचनाहरूलाई हेर्दा उनले सगरमाथा चढेको विश्वास गर्ने आधारहरू नभएको जिकिर गरे । ‘टिम लिडरदेखि उद्धार गर्नेसम्मले होइन भनेका छन्, त्यसमाथि उनले त्यसअघि कुनै ठूला हिमाल चढेको प्रमाण पछि छैन,’ जोयसरले भने । नरेन्द्रलाई पुरस्कार दिने खबर सार्वजनिक भएपछि उनको आरोहणमाथि नै प्रश्न उठाउँदै भारतीय अंग्रेजी दैनिक मिड–डेले बिहीबारको संस्करणमा खोजमूलक समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
लामो समयदेखि पर्वतारोहण क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएकी पत्रकार अनुशा सुब्रमन्यमको खोज समाचारमा नरेन्द्रको आरोहणको दाबीलाई तथ्यसहित गलत दाबी गरिएको छ । हरियाणाका नरेन्द्रले २०१६ मे २० मा सगरमाथा आरोहण गरेको दाबी गरेका थिए । तर, उनकै आरोहण दलका नेता नवकुमार फुकोनले नरेन्द्रले आरोहण गर्न असफल भएपछि बीचबाटोबाटै उद्धार गरिएको खुलासा गरेका छन् । सुरेशराज न्यौपानेले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
भाेक्राहामा प्रहरीकाे सर्च, स्थानीयकाे नाराबाजी
Gepostet von Inaruwa Online am Donnerstag, 20. August 2020
लक डाउनमा बजार पसल खाेले बल प्रयाेग गरिने
Gepostet von Inaruwa Online am Dienstag, 4. August 2020